Steam pane Chrome OS, ichakurumidza kuvepo nekuda kweBorealis | Linux Vakapindwa muropa
Chero mutambi anozviziva kuti yakanakisa desktop desktop yekutamba mitambo yemavhidhiyo iWindows operating system. Muchokwadi, kudzamara nguva pfupi yadarika mashoma mashoma mazita akasiya system yeMicrosoft kuti igare paApple, yava kunzi macOS. Izvo zvachinja mumakore apfuura nekuda kwe chiutsi, sevhisi iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inounzawo mazhinji emazita aya kuLinux-based operating system.
Iko kune inoshanda sisitimu iyo pachezvayo inoita kunge isiri sarudzo hombe yemakomputa emakomputa, asi inozivikanwa kwazvo, yakavakirwa paLinux uye inouya yakananga kubva kufekitori yeGoogle. Ndiri kutaura nezvake Chrome Os, sarudzo iyo, mukuwedzera uye nenzira yepamutemo uye yakapusa, inogona kushandiswa chete pamakomputa emakambani enjini yekutsvaga. Chrome OS iri kutora matanho akakosha kumberi uye munguva pfupi achakwanisa kushandisa Windows maapplication, asi zvinoita sekunge iyo yepamutemo Steam app ichakwanisa kumhanya munzira yakati rebei. Zvishoma.
Chrome OS inomhanyisa Steam nekuiona iyo
Mazhinji maapplication anomhanyisa Chrome OS asiri papuratifomu yavo anoita kudaro kuburikidza nemuchina chaiwo. Inoita izvi neLinux apps uye ichaita saizvozvo neiyo Steam app, kunyangwe uchishandisa imwe "virtualizer". Linux maapplication paChrome OS anofambiswa nechirongwa chinonzi "Crostini", icho, mukufunga, chinomhanya chizere chekuparadzira Linux. Zvino zvakare kune "Borealis", inova iri imwe yemuchina software yeGoogle desktop system.
Borealis Iyo yakavakirwa paUbuntu, kunyanya Ubuntu 18.04 Bionic Beaver LTS, uye ichabatanidza zvisina musono muChannel OS. Uye chakavanzika ndechekuti inosanganisira pre-yakaiswa kopi yeSteam. Mubvunzo mukuru unosara ndewekuti Google ichatsiva chirongwa cheCrostini naBorealis here kana kuti vese vacharamba varipo. Zvingangodaro, Google yasarudza kuita shanduko, asi chiri chokwadi ndechekuti vashandisi veChbookbook vachakwanisa kutamba mazita eSteam munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Chrome OS ichatibvumidzawo kutamba Steam mazita
Kune yangu isingakoshi, kana chromebook kubva pane zvandino nzwisisa ndeye kubasa, kana iwe ukaisa software yekuita kuti steam ishande uye ipapo proton zvinoita kwandiri ndinoti kwete, mashandiro acho anenge ari mheni ... XD